နံနက်ယံ၌ဖီဘရိုင်ယိုမဂ်ဂလီယားနှင့်နာကျင်ခြင်း [အဖြစ်များသောနံနက်ယံလက္ခဏာ ၅ ခု]
နံနက်ပိုင်းတွင် Fibromyalgia နှင့်နာကျင်မှု
07 / 03 / 2019 /1 မှတ်ချက်/i Fibromyalgia/av ရေတံခွန်
Fibromyalgia နှင့်နံနက်နာကျင်မှု - Fibromyalgia နှင့်အတူသူများအတွက်အဖြစ်များသောနံနက်ယံလက္ခဏာများ
သင်၏ fibromyalgia သည်အပိုနာကျင်မှုနှင့်မနက်ခင်း၏လက္ခဏာများနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိပါသလား။
ဤတွင် fibromyalgia ရှိသူများနှင့်များသောအားဖြင့်သိနိုင်သောရောဂါလက္ခဏာ ၅ ခုရှိသည်။
Fibromyalgia သည် ညဘက်အိပ်စက်ခြင်းနှင့် အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးအပေါ် နက်ရှိုင်းစွာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည် - ၎င်းမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။ လက်များနှင့်ခြေများရောင်ရမ်းခြင်းအပြင်မျက်လုံးအောက်ရှိအိတ်ကြီးများနှင့်သင်မကြာခဏနိုးထနေသလား။ fibromyalgia နှင့်အတူအခြားသူများကိုလည်းဒီခေါင်းညိတ်ပါလိမ့်မယ်။ ဤနံနက်ခင်းလက္ခဏာများသည် ကွဲပြားနိုင်ပြီး အချို့သောနံနက်ခင်းများသည် အခြားသူများထက် ပိုဆိုးသည်။ ဒါကြောင့်မို့လို့သင့်ကိုဂန္ထဝင်လက္ခဏာအများဆုံးလက္ခဏာငါးခုအကြောင်းသိချင်တဲ့အကြောင်းအရင်းနဲ့သူတို့သက်သာရာရအောင်သင်ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။
- နာတာရှည် နာကျင်မှုအတွက် အတူတူ
အခြားနာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါနှင့်ရောဂါရှိသူများကိုကုသခြင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောအခွင့်အလမ်းများရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့တိုက်ပွဲ ၀ င်သည်။။ ဆောင်းပါးမျှဝေပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FB စာမျက်နှာပေါ်တွင်ငါတို့ကဲ့သို့ og ကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျု့ချန်နယ် နာတာရှည်နာကျင်မှုခံစားရသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေ့စဉ်ဘ ၀ အတွက်တိုက်ပွဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပူးပေါင်းရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်။
ဤဆောင်းပါးသည် fibromyalgia ရှိသူများတွင် အဖြစ်များသော နံနက်ခင်း လက္ခဏာငါးခုကို ဖော်ပြပါသည်။ - သူတို့ထဲကတချို့ဟာမင်းကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်တယ်။ ဆောင်းပါး၏အောက်ခြေတွင်အခြားစာဖတ်သူများထံမှမှတ်ချက်များကိုဖတ်။ ကောင်းသောအကြံဥာဏ်များလည်းရနိုင်သည်။
၁။ နံနက်ပိုင်းတွင် Fibromyalgia နှင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှု
တစ်ညတာ အိပ်စက်ပြီးနောက် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စွာ နိုးထဖို့ ရုန်းကန်နေရပါသလား။ မနက်ခင်းတွင် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းသည် fibromyalgia ရှိသူများတွင် ဂန္ထဝင်နံနက်ခင်း လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နံနက်ခင်းမှာအနားယူနေတယ်လို့ခံစားရတဲ့ကျန်းမာသန်စွမ်းသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အိပ်ရာမှနိုးရသည့်သဘာဝအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ ငါတို့တွေညံ့ဖျင်းတယ်။
သုတေသန1) များစွာသောသူတို့သည်နက်ရှိုင်းသောအိပ်စက်ခြင်းကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်သောပုံမှန်မဟုတ်သောအိပ်စက်ခြင်းပုံစံများရှိသည်ကိုလည်းပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည်သင် ဦး နှောက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အကောင်းဆုံးအနားယူရာအိပ်စက်ခြင်းအဆင့်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုပေါ့ပါးပြီးမငြိမ်မသက်သောအိပ်စက်ခြင်းသည်တူညီသောအားသွင်းစရာမဖြစ်စေနိုင်သည့်အတွက်လူတစ် ဦး သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊
အထက်ပါပြproblemsနာများထဲမှတစ်ခုသည်ပင်ညအိပ်စက်ခြင်းထက် ကျော်လွန်၍ ခက်ခဲသွားနိုင်သည်။ သင်တို့၏ပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့်မငြိမ်မသက်သောအရိုးများစသည့်ရောဂါများစွာတို့မှသင့်ကိုသင်ထိခိုက်လျှင်၎င်းသည်ကောင်းသောညအိပ်စက်ခြင်းကို ပို၍ ခက်ခဲစေလိမ့်မည်။
ဤလှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်းများအကြောင်း ပိုမိုဖတ်ရှုရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ - သို့မဟုတ် အောက်ပါဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုပါ။
2. Allodynia နှင့် Fibromyalgia
fibromyalgia နှင့်ဆက်စပ်သော ဘုံအိပ်စက်ခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများကို သုံးသပ်ပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် fibromyalgia ၏ကျန်ရောဂါလက္ခဏာများကို ပေါင်းထည့်ရပါမည်။ Fibromyalgia တစ်ခုလုံးကို အမျိုးအစားခွဲသည်။ နာကျင်မှုခုနစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားများ အရာကျိန်းသေနိုးကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တစ်ညလုံးအကြောင်းကိုအိပ်ရာအတွက်လိမ်သေချာအောင်ကူညီနိုင်သည်။
fibromyalgia နှင့်ကြုံတွေ့ရနိုင်သောမတူသောနာကျင်မှုခုနစ်ခုအနက်မှတစ်ခုမှာ allodynia ဖြစ်သည်။ ဤနာကျင်မှုအမျိုးအစားသည် duvet သို့မဟုတ်ကလေးမှပင်အနည်းငယ်ထိမိခြင်းဖြင့်သိသာသောနာကျင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ Fibromyalgia ကိုတစ်ခါတစ်ရံအလင်းထိတွေ့မှုပင်နာကျင်စေသောဤ episodic hypersensitivity ကြောင့် "pea on princess" syndrome ဟုခေါ်သည်။
လူများစွာသည်နေ့စဉ်ဘ ၀ ကိုပျက်စီးစေသည့်နာတာရှည်နာကျင်မှုနှင့်နာမကျန်းမှုများကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေသည်ဒါကြောင့်ငါတို့ကမင်းကိုအားပေးတယ် ဤဆောင်းပါးကိုလူမှုမီဒီယာတွင်မျှဝေပါ, ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါ နှင့် "နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသုတေသနပြုရန်လိုသည်" ဟုပြောပါ။
၃။ အပူချိန်ခံစားမှု၊ ချွေးနှင့်အအေးဓာတ်
တခါတရံ မနက်ခင်းမှာ လုံးဝ အေးခဲတဲ့ ဒါမှမဟုတ် ပူပြီး နိုးလာတတ်သလား အပူချိန် အာရုံခံနိုင်စွမ်းဟာ မနက်ခင်းမှာ သင် ဘယ်လောက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ နောက်ထပ် လက္ခဏာတစ်ခုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ fibromyalgia နှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်အအေးနှင့်အပူနှစ်မျိုးလုံးကိုထိခိုက်လွယ်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ယင်းကိုထိန်းညှိနိုင်စွမ်းအားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ချွေးများတိုးလာသည်။
အဆိုပါ duvet အောက်မှာအိပ်ခြင်းနှင့်အအေးခံစားရရန် - ထို့နောက်မိနစ် ၃၀ အကြာတွင်ပူခံစားရခြင်းသည်လူအများစုတို့၏အိပ်စက်ခြင်းကိုပျက်စီးစေနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်လူအများစုတို့သည်မနက်ခင်းတွင်အလွန်အအေးမိသောကြောင့်အူအတွင်းမှထွက်ရန်ကြိုးစားကြသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အိပ်စက်ခြင်းပြagနာများနှင့်ကြုံတွေ့နေရပါကသင့်မိသားစုဆရာဝန်၏အိပ်စက်ခြင်းလေ့လာမှုကိုသင့်အားလွှဲပြောင်းပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ (ဥပမာအိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ခြင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့) တွေ့ရှိချက်များအားလုံးသည်အိပ်ပျော်စဉ်အသက်ရှူကျပ်ရန် CPAP စက်ကဲ့သို့သောထိရောက်သောကုသမှုကိုရရှိစေနိုင်သည်။ နာကျင်မှုကိုသက်သာစေသည့်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကုသမှုများသည်သင်၏အိပ်စက်ခြင်းကိုတိုးတက်စေရန်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်နိုင်သည်။
၎င်းသည်နံနက်ခင်းတွင်ထ။ ခန္တာကိုယ်၌တောင့်တင်းခြင်းနှင့်ထုံခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထဖြစ်သော်လည်း fibromyalgia ရှိသူများနှင့်ကွဲပြားလေ့ရှိသည်။ fibromyalgia ရှိသူများစွာကဒီတောင့်တင်းခြင်းနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကျန်းမာသန်စွမ်းသူများထက်သိသိသာသာပိုမိုအားကောင်းသည်ဟုဖော်ပြသည်။
အမှန်မှာ၊ ၎င်းသည်သိသာထင်ရှားသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရှိကြောင်းသိရပြီး၎င်းသည်ကျန်းမာသန်စွမ်းသူများသည်သိသိသာသာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဖိစီးမှုပြီးနောက်ကြုံတွေ့ရနိုင်သောကြွက်သားနာကျင်မှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ - သို့မဟုတ်, အသေးစားကားတစ်စီးမတော်တဆမှု။
လူသိများသည်နှင့်အမျှ fibromyalgia သည်ပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးများနှင့်ကြွက်သားများ၌အာရုံခံစားမှုမြင့်မားမှုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်တင်းကျပ်။ ကြွက်သားများကျဉ်းမြောင်းခြင်းမပြုမီထိုင်။ ဖိစီးမှုနည်းလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ သင်အမြဲထိုင်ပြီးခဏခဏလှုပ်ရှားသည်ကိုသင်သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင့်ထံမှ fibromyalgia ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အနေအထားကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်ကြွက်သားများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ရာထူးသစ်သည်နာကျင်မှုနှင့်ဝေဒနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့နောက်တဖန်ရွှေ့။ ကံမကောင်းစွာပဲဒီအရာဟာညဘက်မှာအောင်မြင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်မို့မနက်ခင်းမှာသင်ဟာပိုမိုတောင့်တင်းခိုင်မာပြီးရှုပ်ထွေးမှုကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။
မှန်ကန်သောအစားအစာသည် fibromyalgia ကိုအကျိုးပြုနိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။ fibromyalgia diet သည်အမျိုးသားအစားအစာအကြံဥာဏ်နှင့်လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာသည်။ သငျသညျအကြောင်းပိုမိုအောက်ပါဆောင်းပါး၌ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
မနက်ခင်းတွင် Fibromyalgia နာကျင်မှုကို ဆန့်ကျင်သည့် ကိုယ်တိုင်တိုင်းတာမှုများ
- ကောင်းသောအကြံဉာဏ်- သုံးပါ။ acupressure ဖျာ မနေ့ညက
သင်ဟာ အဆစ်တွေ တောင့်တင်းပြီး ကြွက်သားတွေ တင်းမာနေတဲ့သူတွေထဲက တစ်ယောက်လား။ မနက်ခင်းမှာ တင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်ခြင်းကို ဘယ်လိုဖြေလျှော့ရမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်ခံရရှိလေ့ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ညအိပ်ရာမဝင်ခင်မှာ သင်လုပ်တဲ့အရာဟာ မနက်ခင်းမှာ သင်လုပ်တဲ့အရာနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဟုလည်းလူသိများသော trigger point mat ကိုသုံး၍ ကြိုးစားပါ။ acupressure ဖျာ (၎င်းအကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ - စာဖတ်သူဝင်းဒိုးအသစ်တွင် လင့်ခ်ကိုဖွင့်ပါမည်) သင်အိပ်ရာမဝင်မီ မိနစ် 60 ခန့်အလို။ ဖျာ၏နှိပ်နယ်သည့်အချက်များကို တင်းမာသောနေရာများတွင် အသုံးပြုသင့်ပြီး လူများစွာက ၎င်းသည် ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်တို့ကို ပြေလျော့စေသည်ဟု ခံစားရသည်။ ဖျာကို 15-30 မိနစ်ခန့်သုံးကြည့်ပါ၊ သင်၏ 'ညလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်' ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ၎င်းကို လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုရရှိရန် ကြိုးစားပါ။ ပိုမိုကောင်းမွန်သော နံနက်ခင်းများကို ရရှိရန် ကူညီပေးနိုင်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။
Arnica မုန့် သို့မဟုတ် အပူအေးစက် (အချို့က ကြွက်သားနာတာကို သက်သာစေတယ်လို့ ခံစားရတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်လက်များနှင့်ခြေထောက်များအနည်းငယ်ရောင်ခြင်းနှင့်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများပတ်ပတ်လည်တွင်နိုးထကြသည်။ ဤသည်ကိုလည်းနာကျင်ကိုက်ခဲနာကျင်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ တစ်ခုမှာ fibromyalgia ရှိသူများသည်ဤအရာကြောင့်ဤရောဂါများကိုအဘယ်ကြောင့်ပိုမိုထိခိုက်မှုရှိသည်ဟုလုံးဝမသေချာပါ။ ဒါပေမယ့်တစ်ခုမှာသီအိုရီအမြောက်အများရှိတယ်။
သုတေသနပြုချက်အချို့သည်အရည်ထိန်းထားခြင်းနှင့် fibromyalgia နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ဒါကြောင့်ဒီနာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့ဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတခြားသူတွေထက်ပိုပြီးအရည်များများရှိနေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်လူသိများသည် idiopathic ဖော. အဲဒါကို ကျနော်တို့ သတိပေးတယ်။ ချုံ့လက်အိတ် (ဥပမာ ဤနေရာတွင် ကြည့်ပါ - စာဖတ်သူဝင်းဒိုးအသစ်တွင် လင့်ခ်ကိုဖွင့်ထားသည်) လက်များတွင် အဆစ်အမြစ်နာခြင်းအပေါ် မှတ်တမ်းတင်ထားသော အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။
၎င်းသည်ရောင်ရမ်းခြင်းကြောင့်မဟုတ်ကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည် (fibromyalgia တွင်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအချို့ပါ ၀ င်သော်လည်း) ။ ၎င်းသည်ခြေထောက်၊ လက်နှင့်မျက်စိတို့တွင်အရည်များစုဆောင်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုရိုးရှင်းစွာယုံကြည်သည်။
(PS - ဆောင်းပါး၏နောက်ပိုင်းတွင်ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပါတ်သတ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ပြောမည်)
diuretic အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောမူးယစ်ဆေးဝါးများရှိသည် - ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ထက်ဆီးသွားခြင်းကိုသာမကြာခဏရရှိကြသည်။ သို့သော်လူတိုင်းကဤအရာကိုလုပ်ဆောင်ကြသည်မဟုတ်ပါ တဖန်ဤအရာသည်ယေဘုယျအားဖြင့် fibromyalgia ရှိသူများစွာတွင်လည်ပတ်မှုနည်းပါးသောလည်ပတ်မှုနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ထားပြီးမလှုပ်မရှားဖြစ်နေသောသို့မဟုတ်အိပ်စက်ခြင်းမှအရည်များစုဆောင်းခြင်း၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။
များသောအားဖြင့်ရောင်ရမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ရောင်ရမ်းခြင်းတို့သည်မည်သည့်ပြproblemsနာကိုမှဖြစ်ပေါ်စေမည်မဟုတ်ပါ - သို့သော်လူအများစုအတွက်မူ၎င်းတို့လက်များကိုစနစ်တကျသုံးစွဲရန်နာကျင်မှုနှင့်အခက်အခဲနှစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ အဖြစ်များသည့်ပြproblemsနာများသည်နံနက်ခင်း၌ရောင်ရမ်းနေသောခြေထောက်ပေါ်သို့နင်းမိသည့်အခါနာကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်နံနက်အညွန့်တွင်ရှိသောလက်မောင်းတွင်ကောင်းမွန်သောမော်တာကျွမ်းကျင်မှုရှိခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
လူအများကရောင်ရမ်းနေသောမျက်လုံးများဖုံးအုပ်ရန်မိတ်ကပ်ကိုဝတ်ရန်ရောင်ရမ်းလက်များအသုံးပြုခြင်း၏ပြproblemနာကိုလည်းသိကြသည်။ ပုံမှန်ဆေးများအပြင်ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုလျှော့ချနိုင်သည့်သဘာဝအစားအစာများလည်းရှိသည်။ ပိုမိုထိရောက်သောအာဟာရဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်တစ်ခုမှာအိပ်ရာမ ၀ င်ခင် (သို့) နံနက်အချိန်၌ထခြင်းကဲ့သို့ဂျင်းကိုသောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကြွက်သားတင်းမာစေရန်ရည်ရွယ်သည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးတို့ပါဝင်သည်။ ထို့အပြင်အချို့သောဆေးဝါးများနှင့်အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအဖြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်မသေချာလျှင်သင်၏ဆေးနောက်ဆက်တွဲကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါ။
သင်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အတူနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပါသလား အောက်တွင်သင်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲ - သဘာဝကုသမှုရှစ်ခုအကြောင်းကိုဖတ်နိုင်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်မနက်ခင်းမှာလက်ထဲမှာသွေးလည်ပတ်မှုစတင်ဖို့ဒီလေ့ကျင့်ခန်းခြောက်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါတယ်။
နာတာရှည်နာကျင်မှုအတွက်ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်မှုအတွက်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ပါ ၀ င်ပါ
တနည်းကား, ငါတို့ချင်တယ် ဒီဆောင်းပါးကိုလူမှုရေးမီဒီယာဒါမှမဟုတ်သင့်ဘလော့ဂ်ကနေတစ်ဆင့်မျှဝေဖို့ကောင်းကောင်းတောင်းပါ(ဆောင်းပါးနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ) နားလည်ခြင်း၊ အထွေထွေဗဟုသုတနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးလာခြင်းသည်နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါခံစားနေရသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေ့စဉ်ဘဝဆီသို့ ဦး တည်သည့်ပထမဆုံးအဆင့်များဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်မျှဝေဖို့ဒီကိုနှိပ်ပါ တစ် ဦး ကကြီးမားတဲ့ fibromyalgia ၏နားလည်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ကူညီပေးသူကိုလူတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Option B: သင်၏ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆောင်းပါးနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ။
ဒီရောဂါအတွက်အကြံပြု Self- အကူအညီ
compression ဆူညံသံ (ဥပမာအားဖြင့်ကြွက်သားများသွေးလည်ပတ်မှုတိုးလာစေသည့်ချုံ့ခြေအိတ်များ)
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/fibromyalgi-og-smerter-på-morningen.jpg?media=1648573622 368 700 ရေတံခွန် https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ရေတံခွန်2019-03-07 17:19:172022-03-18 15:48:00နံနက်ပိုင်းတွင် Fibromyalgia နှင့်နာကျင်မှု
သဒ္ဒါ ocd နှင့်အတူစိတ်ဆိုး fibro လက်နက် says:
၇ မျိုးစိတ် Fibromyalgia နာကျင်မှု Fibromyalgia မီးတောက် -ups နှင့်အစပျိုး